दैलेखमा चुनावको आंकलन | रिपोर्टर्स नेपाल
दैलेखमा चुनावको आंकलन
दैलेख, १५ मंसिर । आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा दैलेखमा चुनावी प्रचार अभियान तीव्र बन्दै गएको छ ।
विसं २०७० को आम निर्वाचन र स्थानीय चुनावको मत आंकलन गर्ने हो भने दैलेखमा वामगठबन्धन बलियो देखिएको छ । यसअघिको निर्वाचनमा एमालेबाट सभासद विजयी भएका अमरबहादुर थापा अहिले प्रदेश १ को ९ख० मा चुनावी मैदानमा छन् ।
नेपाली भाषाको पहिलो सिलालेकसँगै हजारौँ मूर्त अमूर्त सम्पदाको धनि जिल्ला भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि धार्मिक क्षेत्रको संरक्षणका लागि ठोस् योजना जिल्लामा आएको देखिदैन् ।
राकम कर्णालीमा निर्माण हुन थालेको नयाँ शहर आयोजना विगत पाँच वर्षदेखि अन्यौलमै देखिएको छ । पुराना र बाँकी रहेका विकासे आयोजनाभन्दा अहिले दलहरुले नयाँ-नयाँ योजना ल्याएर गाउँ अभियानमा होमिएका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा कसको कति वर्चश्व
दैलेखका ११ स्थानीय तहमध्ये सातवटा स्थानीय तहमा एमाले र चार वटामा काँग्रेसले जित हात पारेको थियो । प्रदेश १ को ९क० मा पर्ने डुगेश्वर, भगवतीमाई र गुराँस गाउँपालिकाको वामगठबन्धनको मत जोड्ने हो भने १० हजार ८४५ मत देखिन्छ भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नौ हजार ९२३ मत देखिएको छ ।
प्रदेश १ को ९क० मा वामगठबन्धनबाट ९माओवादी केन्द्र०का युवा नेता धर्मराज रेग्मी र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेस दैलेखका पार्टी सभापति कृष्ण विसीबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नं १ को ९ख० मा पर्ने नारायण नगरपालिका, महाबु गाउँपालिका र नौमूले गाउँपालिकाको वाम गठबन्धनको स्थानीय चुनावको मत जोड्ने हो भने १३ हजार ६५१ रहेको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मत जोड्ने हो भने ११ हजार ३४६ मत देखिन्छ ।
नेकपा ९एमाले०बाट विसं २०७० मा संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भएका अमरबहादुर थापा यसपालि प्रदेश सरकारको मन्त्री बन्ने पक्का भएसँगै प्रदेशबाट चुनाव लडेका छन् ।
उहाँका प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका पुराना नेता जगतजंग थापा पनि आफू विजयी हुने ढुक्क भएको भन्दै प्रचारमा जुटेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नं २ अन्तर्गत ९क० मा पर्ने दुल्लु नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिकामा वामगठबन्धनले १२ हजार ८८ मत ल्याएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट नौ हजार ५५७ मत देखिएको छ ।
यो मतको आंकलनसँगै वामगठबन्धन धेरै भए पनि प्रतिस्पर्धा कडा देखिएको नेताले बताएका छन् । प्रदेश नं २ को ९क० बाट वामगठबन्धनका तर्फबाट युवा नेता सुशील खड्का र नेपाली काँग्रेसका मधुरविक्रम खनालबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
क्षेत्र नं २ को ख अन्तर्गत चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका, आठबीस नगरपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिका जोडेर बनेको निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय चुनावमा आएको मतपरिणाम हेर्ने हो भने वामगठबन्धनको मत १० हजार ९४७ पुग्छ भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आठ हजार २२४ मत देखिन्छ । उक्त क्षेत्रमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा नेपालको पनि राम्रै प्रभाव देखिएको छ ।
क्षेत्र नं २ को ९ख० बाट वामगठबन्धनबाट एमालेका राजबहादुर शाही र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसका दिक्पाल शाहीबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । एमालेका शाही पूर्व गाविस अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने काँग्रेसका दिक्पाल शाही निर्माण व्यवसायीका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ ।
निर्वाचन कार्यालय दैलेखको दिएको मतदाताको संख्या र स्थानीय निर्वाचनमा खसेको मतको विश्लेषण गर्ने हो भने स्थानीय निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मत खसेको थियो । जसको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने नयाँ मतदाता र उपस्थित हुनबाँकी रहेका अन्य २६ प्रतिशत मतदाताको उपस्थिति पूर्ण भएमा अहिलेको आंकलनमा फरक पर्नसक्ने धेरै सम्भावना रहेको देखिन्छ । रासस
आगामी निर्वाचनको मतगणना तालिका सार्वजनिक, दुवै चरणको निर्वाचनको मतगणना एकैचोटी सुरु गरिने
नेता बन्न सेलिब्रेटीहरुको यस्तो दौडधुप !
प्रकाशमान र गगन थापासँग देउवा रुष्ट, कारबाही गर्ने’bout छलफल !
भक्तपुर क्षेत्र नं १ प्रदेश सभा १ एमाले हरिशरण लामिछाने ७६२४ कांग्रेस जीवन खत्री ५४९१ नेमकिपा नीरज लवजु २२४२